Ony Rambelo – MyDago.com aime Madagascar
Auteur : Ony Rambelo
Mifangaro ny zavatra lazainy
Efa nanomboka teny an-kianjan’ny 13 mey nandritra ny tolon’ny volon-daoranjy, no nisavoritaka ny fanazavan-kevitra araky ny lalàna, izay tanisain’ny Minisitry ny Fahefana avo miadidy ny fitsarana RAZANAMAHASOA Christine. Tsy mazava intsony ny foto-dalàna tena arahiny sy ny fahefana nanendry azy.
Rehefa ny olona nanendry tena, na naka ny fahefana tamin’ny alalan’ny « teritery » (tsy voafidy) no manao ny asan’ny filohan’ny repoblika dia mahazo manome famelan-tsazy toy ny olom-boafidim-bahoaka. Azo antsoina sy terana hantsoina hoe : FILOHA. Rehefa ny fahefana sy ny andri-pitondrana mivorivory any anaty lapa any no mandinika ny famotsoran-keloka eto amintsika dia mety sy azon’izy ireo atao izany. Azony hatao ny mandinika ny teti-bola, nandany ny lalàna ho an’ny fifidianana sy ny maro hafa. Rehefa ny lalam-panorenana no voafidin’ny “vahoaka” amin’ny an-tsasa-manilany dia azo dinganina izany ka natsangana tamin’ny alalan’ny ravin-taratasy ny naha-“minisitra” na naha-CT, na naha-CST. Saingy izy rehetra ireny dia tsy azo antsoina velively hoe: solombavam-bahoaka satria tsy voafidy. Izany no fanazavan’ny mpitasara miadidy ity minisiteran’ny fitsarana ity.
Tsy mila resahina akory ny maha-tsimatimanota an-dRanona na i Ranona, ka tsy azo samborina eo ampanaovana ny asany, fa ny olana ho an’ity minisitra miadidy ny fitsarana ity dia mifangaro voraka ny dikan’ilay didy hitsivolana 2010-010 nananganana ny andri-pitondrana roa, sy ny andininy faha-73 ao amin’ny lalampanorenana. Misy ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita, te ho Filohan’ny Gasy, sy hikaroka ny fankatoavana ho an’ny Gasy, misy PDS te-hantsoina hoe “Ingahy Maire”, ny CT mba te-ho Depioté, ny CST mihevitra azy ho senatera…Mifangaro tanteraka satria…tatezan-kazo no hiampitana e!
Auteur Ony RambeloPublié le 14 juillet 2011 14 juillet 2011 Catégories Malagasy, Politique3 commentaires sur Razanamahasoa Christine